Navoaka ny sary vaovao an'ny HTC Desire Eye | Androidsis
Vao nivoaka ny vaovao ireo vaovao sarin'ny HTC Desire Eye, ny smartphone vaovao ho an'ny selfie avy amin'ny mpanamboatra Taiwanese. Ary raha mahita fahitana lynx ianao ary mijery eo alohan'ilay fitaovana dia azonao atao ny mamaky eo akaikin'ny Lensa "13 MP Wide Angle", izay hanamafy ny fakantsary ho an'ny selfies an'ny HTC Desire Eye.
Efa fantatroFantatray fa tsy ho ela dia hanao ny hetsika "Double Exposure" i HTC, izay hanoloranao ireo vokatrao vaovao. Antenaina hanararaotra hanolotra ny vaovao izy ireo HTC Eye range, izay hisongadina amin'ny fakantsariny eo alohany mba hanaovana “selfie”.
1 Ny sasany amin'ireo toetra ara-teknikan'ny HTC Desire Eye dia voamarina
2 Ny HTC Desire Eye dia ho hita mena sy manga
Ny sasany amin'ireo toetra ara-teknikan'ny HTC Desire Eye dia voamarina
Ny antsipiriany iray hafa izay efa tafaporitsaka dia momba ny mety hahatongavan'ilay HTC Desire Eye Fanamarinana IPX7, izay mamela azy hilentika any amin'ny lalina indrindra 3.2 metatra mandritra ny 30 minitra farafaharatsiny. Efa nisy ny tsaho niresaka momba izany mety izany fa ny filazan'ny loharanom-baovao hafa dia vaovao tsara.
Ny HTC Desire Eye dia antenaina hanana ny hardware dia mitovy amin'ny an'ny HTC One M8. Amin'izany no ahitantsika terminal miaraka amin'ny efijery FHD 5.2-inch, ho fanampin'ny processeur Qualcomm Snpadragon 801 amin'ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 2.3 GHz, 2 GB RAM, ary ireo fakantsary lehibe sy aoriana misy solomaso 13 megapixel.
Ny HTC Desire Eye dia ho hita mena sy manga
Tsy azontsika hadino ny tahiry 32 GB, ny Bateria 2.400 mAh, Fanamarinana IPX7 sy ny anjarany amin'ny Android 4.4.4 ambanin'ny sosona HTC Sense 6 avy amin'ny mpanamboatra monina ao Taoyuan. Ary farany, ny HTC Desire Eye dia antenaina ho hita amin'ny loko roa: mena sy manga.
Tsy fantatray ny daty fandefasana na ny vidin'ny HTC Desire Eye rehefa mahatratra ny tsena izy io, na dia eo aza ny fijerena ny mampiavaka azy ara-teknika dia mety ho eo amin'ny 600-700 euro izany.
Tena mandeha tsara ny HTC. Efa hitantsika ny azy tatitra ara-bola farany, izay manatsara ny valiny raha oharina amin'ny taona tamin'ny taon-dasa ary azo antoka fa ny HTC Desire Eye dia hanampy ny mpanamboatra Taiwaney hivoaka amin'ny lavaka. Na dia somary kely ihany ny bateria 2.400 XNUMX mAh ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » Ny sary vaovao an'ny HTC Desire Eye dia manamarina ny fakantsary eo anoloana 13 megapixel
Na dia tsaho aza dia mety hoe tsara kokoa ny bateria, dia fitaovana tsara ity.